७० वर्षे युवा, ३५ वर्षे वृद्ध !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
सबै दलमा संस्थागत अवरोध छन् । तर, गैरकम्युनिस्टभन्दा कम्युनिस्ट दलमा अवरोध भत्काउन मुस्किल देखिन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास या जनवाद, यो मामिलामा कम्युनिस्टहरु बढी रक्षात्मक छन् । यो संयोग मात्रै नभएर केही सैद्धान्तिक समस्या पनि हो ।
पुस १७, २०७८ मानुषी यमी भट्टराई
बोरिच मभन्दा जम्मा ११ दिनपछि जन्मिएका रहेछन् । सामान्यतया नेपालमा मेरो पुस्ताबाट अहिले नै राजनीतिमा त्यो स्तरको नेतृत्व–प्राप्ति केवल एक काल्पनिक दृश्य देखिन्छ । मैले मनमनै गमें– यो कल्पना यथार्थमा परिणत हुन कति समय लाग्ला ? ११ दिन ? ११ वर्ष ? ११ पुस्ता ? दिन, वर्ष या पुस्ता– वास्तवमा यो समयको अन्तराल मात्रै होइन, हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली, सैद्धान्तिक–बौद्धिक धरातल, सामाजिक–सांस्कृतिक चिन्तन र राजनीतिक संस्कारको चित्रण पनि हो ।
हाम्रो आँखैअघि चिली, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा के कारण युवा नेतृत्व सम्भव भयो ? र, हाम्रोमा चाहिँ युवा नेतृत्व किन आकाशको फलजस्तै भएको छ ?
विगत केही वर्षयता सार्वजनिक वृत्तहरूमा युवा र राजनीतिमाथि छलफल नभएका होइनन् । टीभी टक–शो, साहित्य महोत्सव, लेख–रचनाहरूमा यो विषयले यथेष्ट स्थान पाएकै छ । दलहरूले आ–आफ्ना प्रतिवेदनमा जेसुकै लेखे पनि, जतिसुकै विशिष्टता दाबी गरे पनि व्यवहारतः उनीहरूको अभ्यास–आचरणमा खासै अन्तर देखिँदैन । आम मानिसलाई नेपालका प्रमुख पार्टीहरूबीच ‘फरक छुट्याऊ’ को अभ्यास गर्न पक्कै गाह्रो पर्छ । यस्तो राजनीतिक परिदृश्यमा अलि फरक र नयाँपन झल्किने बहस अब ‘पुस्तान्तरण’ को सवालमा हुँदै छ ।
सारमा यो विषयउपर दुई धारबाट बहस भएको देखिन्छ । उमेर प्रमुख कि विचार ? एक धार भन्छ, विचारधारा जेसुकै होस् नेतृत्व युवाहरूको हुनुपर्छ । यसले जमेको तलाउमा ढुंगा हान्दा उत्पन्न हुने तरंगझैं केही न केही नयाँपन ल्याउँछ र युवाहरूमा जोस जाँगर भर्छ । जतिसुकै अनुभवी भए पनि उमेरको आफ्नै किसिमको सीमा हुन्छ । र, समयको नियमसँग सबै जना अन्ततः झुक्नैपर्ने हुन्छ । दोस्रो धार भन्छ, उमेर संख्या मात्रै हो, मुख्य कुरा त विचार हो ! पुरानै विचार बोक्ने युवा नेतृत्वको के अर्थ ? उमेरले बूढो छ, तर नयाँ चेतना विकास गर्छ, पछिल्ला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डहरूबारे आफूलाई अपडेट गर्छ र समसामयिक समस्याको पहिचानसहित समाधानका नयाँ बाटो खोजी गर्छ भने सापेक्षित रूपमा रूढिवादी–प्रतिगामी युवाभन्दा अग्रगामी–क्रान्तिकारी बूढोमै युवापन हुन्छ । अर्थात्, ७० वर्षे युवा रोज्ने कि ३५ वर्षे वृद्ध भन्ने प्रश्न गर्छ यो धारले ।
कुनै पनि राजनीतिक संगठनका निम्ति पुस्तान्तरणले ठूलो महत्त्व राख्छ । ढिलो या चाँडो, नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नभए त्यो संगठनको ऊर्जा मर्दै जान्छ । र, संगठनप्रतिको आकर्षण पनि ह्रास हुँदै जान्छ । नयाँ युगसापेक्ष संवाहक नहुने हो भने दलहरूले अवलम्बन गरेका विचार र राजनीतिक एवं सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम अल्पकालीन हुन जान्छन् । यस अर्थमा नेतृत्वका विभिन्न तहहरूमा युवाहरूको उदय त्यो पार्टी/आन्दोलन/विचारको निरन्तरता र गतिशीलताको सुनिश्चितता पनि हो । तसर्थ विचारका कुरा मात्रै गर्ने, युवा नेतृत्वको विकासमा टेवा नपुर्‍याउने, पुस्तान्तरणलाई पुँजीवादी लफ्फाजी ठान्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिको रिलेदौडमा उनीहरूको हार निश्चित छ ।
यसो भनिरहँदा अर्को विषय पनि बुझ्नु जरुरी छ । पार्टी/विचारले पुस्तान्तरणमार्फत निरन्तरता पाउनु र पार्टी/विचारको विकास हुनु गुणात्मक रूपमा फरक विषय हुन् । यहाँ विकास भन्नाले नयाँ युग र परिस्थितिको सापेक्षतामा पार्टीको वैचारिक–सांगठनिक अग्रगामी रूपान्तरणको अर्थमा भनिएको हो ।
पार्टीले ताजा अनुहार पाउने, तर त्यसले पस्किने राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक योजनाहरू झन् बासी हुने भयो भने सुनको जलप लगाएको पित्तलजस्तो हुन जान्छ ।
हालसालै महाधिवेशनको मौसममा दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण कि निरन्तरता भन्ने स्वाभाविक प्रश्नसँगसँगै पुस्तान्तरणको सवालले पनि निकै चर्चा पायो । तर, त्यत्ति नै ध्यान वैचारिक विमर्शमा भने गएन । यो दुःखद पक्ष किन हो भने पुस्तान्तरण भनेको व्यक्तिकेन्द्रित मुद्दा मात्र होइन । यो अनिवार्य रूपमा विचारसँग गाँसिएको हुन्छ । नयाँ पुस्ताले नेतृत्व प्रदान गर्ने भनेको उसको वाक्पटुता र व्यवस्थापन कौशलताले मात्र होइन । आम जनताले भोगिरहेका समस्याको समाधान दिन सके मात्रै नेतृत्वको प्रत्याभूति हुने हो ।
हरेक नेतृत्वको आफ्नै मौलिक चरित्र र खुबी हुन्छ, तर उसले ती केका निम्ति प्रयोग गर्छ ? सामाजिक दायित्वका निम्ति कि व्यक्तिगत उत्थानका निम्ति ? पर्यावरणीय संकटबारे उसको के योजना छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सहरीकरणका विभन्न आयाम, अनौपचारिक श्रम, धर्म–संस्कृतिलगायत थुप्रै विषयमा उसको धारणा के छ भन्ने कुरा उसको वैचारिक–सैद्धान्तिक धरातलले नै आकार दिने हो, दिशाबोध गर्ने हो । नेतृत्वहरूले समाजका विभिन्न मुद्दाबारे तौली–तौली बोल्ने वा नबोल्ने उनीहरूको व्यक्तिगत छनोटको विषय मात्रै होइन । उखु किसान, निर्मला कुर्मी, नवराज विक, रूपा सुनारलगायतका पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने आफ्नो–आफ्नो सिद्धान्तकै कुरा हो ।
यस अर्थमा कांग्रेसमा गगन थापाको उदय ‘युवाको उदय’ को अर्थमा मात्रै महत्त्वपूर्ण नभई उनले अघि सारेका पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाप्रतिको स्पष्ट रुझानको कोणबाट झन् अर्थपूर्ण छ । साथै उनले प्रस्तुत गरेका सामूहिकताभन्दा व्यक्तिप्रधान हुने उदारवादी सिद्धान्तले व्यावहारिक रूपमा महिला, दलितलगायत ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायहरूको उन्मुक्तिको संघर्षका निम्ति के नयाँ खुराक प्रदान गर्छ ? भूमिहीनताबारे के समाधान दिन्छ ? बहस यता पनि हुनुपर्ने हो । त्यसैगरी राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयले व्यक्तिगत रूपमा उनलाई पोलिटिकल सेलिब्रेटी त बनायो, तर उनको विजय झन् कट्टर राजावादीको उदय हो भनेर चिन्तन–चिन्ता गर्ने विषय पनि हो ।
यसको विकल्पमा वामपन्थीका विभिन्न घटकभित्र न कुनै वैचारिक प्रस्टता देखिन्छ न कुनै प्रभावकारी युवा हस्तक्षेप ।
कांग्रेसभित्र सभापतिमा पुरानै अनुहारले निरन्तरता पायो । तैपनि परम्परागत रूपमा नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस प्रायः परिवारवादकै सेरोफेरोमा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो पटक लिगेसी होइन आफ्नै लगनशीलताले धनराज–गगन–विश्वप्रकाशहरूको उदय भएको छ । बूढो पार्टी अलिकति तंग्रिएको छ । वामपन्थी वृत्तभित्रचाहिँ मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आजीवन नेतृत्वमा रहने प्रवृत्तिमाथि बहस हुनेगर्छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ आफैँ नेतृत्वमा बसिराख्ने वा आफ्नो रबरस्ट्याम्प पात्र तयार नभएसम्म नेतृत्व छोड्न मन नगर्ने मूल समस्या देखिन्छ ।
जनयुद्धताका युवा नेतृत्वको वर्चस्व रहेको माओवादीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय त परै जाओस्, हस्तान्तरणको सम्भावनासमेत देखिन्न ।
अघिल्लो दशकमा माओवादी आन्दोलन संगठनात्मक रूपले बलियो र एजेन्डाका हिसाबले प्रभावशाली भएका बेला कांग्रेस आइडेन्टिटी क्राइसिसबाट गुज्रिरहेको थियो भने अहिले यो अवस्था उल्टिएको छ । एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच नेतृत्व, सांगठनिक मनमुटाव, शक्ति बाँडफाँटका मतभिन्नताबाहेक उनीहरू के कुरामा फरक हुन् स्पष्ट भइसकेको छैन । जसरी नेपालमा माओवादीहरूको बढ्दो प्रभाव राजतन्त्रसँगसँगै परम्परागत संसदीय दलहरू (मूलतः कांग्रेस र एमाले) को घट्दो प्रभावसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो त्यसैगरी अहिले वामपन्थीहरूको बढ्दो राजनीतिक संकटसँगसँगै कांग्रेस र अन्य उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिहरूका निम्ति राजनीतिक सम्भावनाहरू/अवसरहरू बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । कुनै बेला अरूको ईर्ष्याको विषय थिए वाम युवाहरू । अहिले वाम युवाको अत्यासलाग्दो अवस्था समग्र वामपन्थी आन्दोलनकै ओरालो यात्रासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । कुनै कालखण्डमा आन्दोलनलाई उचाइ प्रदान गरेकोमा उच्च सम्मान गर्नु भनेको आन्दोलनलाई अधोगतिमा पुर्‍याउँदा पनि त्यही गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन । अब पनि त्यही नेतृत्वबाट समग्र वाम आन्दोलनको उद्धार हुन्छ र हामीले पुनः राजनीतिक स्थान बनाउँला भनेर बसे त्योभन्दा ठूलो निरीहता र नालायकीपन केही हुँदैन । अब समग्र आन्दोलनकै उत्थान वाम युवा आफैँले गर्ने हो भन्ने हुटहुटीसहित अग्रमोर्चा सम्हाल्न थाल्नुपर्छ ।
जसरी विज्ञानमा गति र समयबीच व्युत्क्रमानुपातिक (इन्भर्स्ली प्रोपर्सनल) सम्बन्ध हुन्छ, युवाहरूको उदय र जेरोन्टोक्रेसी (वृद्ध–शासन) बीच पनि त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ । अतः जति रफ्तारमा युवाहरूले सांगठनिक रूपमा सचेत पहल र वैचारिक–सैद्धान्तिक रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यति नै चाँडो उमेर र विचार दुवैले बूढो नेतृत्व विस्थापित हुन सक्छ । युवा नेतृत्व कसैले थालमा पस्किएर दिने चीज होइन । पालो पर्खेर आउने कुरा पनि होइन । अन्यथा, ३५ वर्षीय वामपन्थी नेता बोरिच चिलीका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुने थिएनन् होला ।
संस्थागत अवरोधहरू (असुविधाहरू)
नयाँ विचारसहितको नयाँ पुस्तान्तरण कति सम्भव छ ? यो विषय हामी युवाहरूको आत्मगत पहलमा भर त पर्छ नै । सँगसँगै हाम्रो सामाजिक बनोट, पार्टी र राजनीतिक संस्थाहरूको ढाँचाले पनि असर गर्छ । आखिर डाईअनुसारकै सामान तयार हुने न हो । उदाहरणका निम्ति, राष्ट्रपतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि नै बोरिच चिलीको व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा दुईपटक निर्वाचित भइसकेका नेता हुन् । र, वाम गठबन्धनको प्राइमरी निर्वाचनमा ६० प्रतिशत मत प्राप्त गरेर राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका हुन् । त्यसैगरी, जेसिन्डा आर्डेन (न्युजिल्यान्ड) र सान्ना मरिन (फिनल्यान्ड) जस्ता कम उमेरका राजनीतिज्ञहरू संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुमा उनीहरूको पार्टीको संरचनासँगसँगै अन्य सामाजिक आधार पनि सहयोगी कारक देखिन्छन् । जस्तो कि, संसारमै सबभन्दा पहिले सबै महिलालाई मताधिकार प्राप्त भएको स्वशासित देश न्युजिल्यान्ड हो । त्यस्तै, युरोपमा सबभन्दा पहिले सर्वव्यापी र समान मताधिकार अभ्यास गरेको देश फिनल्यान्ड हो ।
दुःखको कुरा, हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाहरू युवामैत्री छैनन् । सामन्ती अवशेषहरू पूर्ण रूपले विस्थापित भइनसकेको हाम्रो समाजमा सोपानतन्त्रले अत्यधिक काम गर्दै आएको छ । वर्गीय, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीयलगायतका स्तरविन्यास (स्ट्राटिफिकेसन) सँगसँगै उमेर अनुसारको मान सम्मान, शक्ति अभ्यास, अधिकार विन्यास आदिलाई पनि स्वाभाविक ठान्ने प्रचलन हामीमा छ । हाम्रा पारिवारिक अभ्यासहरू, शिक्षण पद्धतिदेखि दलभित्र ‘दाइ संस्कार’ र ‘बा संस्कार’ सबै यसकै उदाहरण हुन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने, तर समाजमा जरा गाडेर बसेका यस्ता सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोध भत्काउन युवा नेतृत्व विकासका निम्ति अनिवार्य सर्त हो । तर, यी रातारात भत्किन्नन् । यसको परिवर्तन वा सुधार दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ ।
युवा नेतृत्वको कुरा गर्दा हामीले बिर्सिन हुन्न– युवा भनेको एकल चरित्रको (होमोजिनियस) समूह होइन । वैचारिक हिसाबले नेपाली युवाहरू उग्रदक्षिणपन्थीदेखि उग्रवामपन्थीसम्म विभाजित छन् । विदेशमा आफ्नै खर्चले पढ्न जान सक्ने हैसियत भएकादेखि ज्यान बन्धक राखेर विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य हुने युवा पनि यही समाजभित्र छन् । कतिपय युवाका निम्ति सडक आन्दोलन जीवन–मरणकै सवाल हुन्छ, हरेक कुरा दाउमा राखेर ऊ सडकमा उत्रिन्छ भने कतिपयका निम्ति यो फुर्सदमा गर्ने सेलेक्टिभ एक्टिभिज्म हो । जीविकोपार्जनकै कार्यहरूमा अहोरात्र खटेर पनि खर्च धान्न आच्छुआच्छु पार्ने महँगी, न्यून तलब, उच्च लिभिङ कस्टबाट थच्चिएर राजनीति गर्न ल्याकत नराख्ने एकथरी युवा छन् भने केहीको आयआर्जन नै नेताको आशीर्वादमा निर्भर छ । साथै उमेरले युवा समूहभित्र परे पनि लिंग, जात, क्षेत्र, भाषा, धर्म, अपांगता आदिका आधारमा विद्यमान रहेका संरचनागत विभेदले केही युवालाई अन्य युवाभन्दा राजनीतिमा स्थान बनाउन, निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र नेतृत्वमा पुग्न गाह्रो छ । यसकारण पनि युवा नेतृत्वलाई निरपेक्ष रूपमा उमेरको मानकअनुरूप मात्रै बहसको विषय बनाउनु एकांगी हुन्छ ।
कमजोर अर्थ–राजनीतिक जगमा खडा भएका हाम्रा दल र राज्य संरचनाहरूमा पनि सुधार्नैपर्ने पक्षहरू छन् । जस्तो कि नेतृत्वको कार्यकाल निर्धारण नहुनु, उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन नहुनु, आवश्यकता वा बाध्यताका नाममा टीकेप्रथा अभ्यासमा हुनु, अनियन्त्रित खर्चिलो चुनावी तामझाम बढ्नु आदि । यी पक्ष युवा नेतृत्व विकासलाई अवरोध गर्ने खालका छन् । केही पक्ष त युवा प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने होइन, भ्रष्टीकरण गर्ने खालका छन् । त्यसैले नेताहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्न, भक्तिगान वा जयजयकार गर्ने प्रतिस्पर्धा युवाहरूबीचमै हुने गर्छन् ।
सबै दलहरूमा कुनै न कुनै स्वरूपमा यस्ता संस्थागत अवरोधहरू (इन्स्टिच्युसनल बेरियर्स) छन् । तर, गैरकम्युनिस्टहरूमा भन्दा कम्युनिस्ट दलहरूमा यस्ता अवरोधहरू भत्काउन मुस्किल देखिन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास भनौं या जनवादको, यो मामिलामा कम्युनिस्टहरू बढी रक्षात्मक छन् । यो संयोग मात्रै नभएर केही सैद्धान्तिक समस्या पनि हो ।
शीतयुद्धको पृष्ठभूमिमा जबरजस्त रूपमा स्थापित गरिएको सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण थियो– उदार लोकतन्त्र भर्सेस सोभियत समाजवाद । जसअन्तर्गत लोकतन्त्रको पर्याय नै उदार लोकतन्त्र हो भनेर स्थापित गरियो र यही मानकअनुरूप अन्य राजनीतिक अभ्यासहरूलाई गैरलोकतान्त्रिक करार गरियो । त्यसकै प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि डेमोक्रेटिक भर्सेस कम्युनिस्टवाला भाष्य स्थापित भयो, जसको प्रभाव आजसम्मै यथावत् छ । त्यसकै अंशको रूपमा पार्टिभित्र निर्वाचन हुनु/नहुनुलाई कुन पार्टी कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कसी बनेको छ ।
तर, विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्रभित्रका संकटहरू छताछुल्ल हुन थालेको अवस्थामा अब लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनाव मात्रै होइन भन्न स्वयं उदार लोकतन्त्रवादीहरू नै कस्सिन थालेका छन् । र, समीक्षा गर्दै छन् ।
मार्क्सवादी वा वाम खेमाभित्र त यो पहिल्यै स्पष्ट विषय थियो । अंग्रेजीको एउटै शब्द ‘डेमोक्रेसी’ को उल्था गर्न नेपालीमा विभिन्न शब्दावली छन्– प्रजातन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र आदि । वामपन्थीहरूले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने डेमोक्रेसीको उल्था जनवाद हो । प्रत्यय ‘तन्त्र’ र ‘वाद’ मा जति तात्त्विक फरक छ त्यति नै जनवाद र डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्ररूपी उल्थामा छ । यसले डेमोक्रेसीलाई औपचारिक राजनीतिक शासन पद्धतिको रूपमा मात्र नभई बृहत् सामाजिक–आर्थिक स्वतन्त्रता र समानताका रूपमा र चुनाव, शक्ति पृथकीकरणजस्ता प्राविधिक यन्त्र मात्र नभई ‘वाद’ अर्थात् होलिस्टिक सिद्धान्त, अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था र जीवनपद्धतिकै रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । त्यही अनुरूप संविधानको खाका निर्माण गर्ने प्रक्रियामा ‘जनवाद’ शब्दलाई ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ ले विस्थापित गरे पनि सारमा त्यहाँ ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ सँगसँगै समाजवादी जनवादको रोचक सम्मिश्रण माओवादी पार्टीले गर्न सकेको देखिन्छ । तर, विडम्बना, माओवादीले संविधान निर्माणको लामो संक्रमणकाल दौरान सहमतिको दस्तावेजका नाममा केमा लचकता देखाउने र केमा सम्झौता नगर्ने भन्ने सन्तुलन मिलाउन सकेन र आफ्नो विशिष्ट पहिचान नै गुमायो ।
साथै मार्क्सवाद वा समाजवाद विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादको क्रिटिकका रूपमा आफ्ना सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमका निम्ति जति सफल र लोकप्रिय देखिन्छन्, राजनीतिक शक्ति अभ्यास वा सत्ता सञ्चालनको मामिलामा भने चिप्लिएको छ । एउटा राजनीतिकर्मी सँगसँगै राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको आँखाबाट हेर्दा राज्यसत्ता, शासन प्रणाली, संगठनात्मक सिद्धान्त, डेमोक्रेसीको संस्थागत अभ्यासका मामिलामा स्वंय मार्क्सकै कृतिहरूमा केही मौनता छन् । रोचक कुरा के छ भने मार्क्स आफैँले लेख्ने इच्छा प्रकट गरेर पनि लेख्न अधुरो रहेको कृति ‘राज्य’ (द स्टेट) उपर रहेछ । १९ औं शताब्दीमा प्रतिपादित सिद्धान्तले अहिलेको विकसित परिवेशमा सबै कुराको यथेष्ट सम्बोधन त गर्दैन नै । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष अपडेट गर्दै मार्क्सीय/समाजवादी कोणबाट जति अर्थराजनीतिक व्यवस्था, वातावरणीय संकट, विज्ञान प्रविधिको विकासबारे रचनात्मक काम भएका छन् त्यति नै काम र पहल डेमोक्रेसीको संस्थागत अभ्यासमा भएको देखिन्न ।
नेपालमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा रहेका मौनताहरूलाई भर्ने र/वा नयाँ सैद्धान्तिक अवधारणा विकास गर्नुपर्ने कार्य हाम्रासामु छन् । उदार लोकतन्त्रका कर्मकाण्डी अभ्यास, विकृत र वस्तुकरण (कमोडिफाइड) भएका चुनावी अभ्यासका पर्याप्त आलोचना दस्तावेजमा पढ्न पाइन्छ, भाषण प्रशिक्षणमा सुन्न पाइन्छ । अब वैकल्पिक अभ्यास के हो नयाँ पुस्तालाई बुझाउन र देखाउन ढिलो हुँदै छ ।
त्यसैले आ–आफ्ना पार्टीभित्र र राज्य प्रणालीभित्रका संस्थागत अवरोधहरूलाई भत्काउन नयाँ लोकतान्त्रिक संस्थागत अभ्यासहरू विकसित गरौं, जस्तो कि प्राइमरी निर्वाचन, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका, जहाँ अन्य समूहसँगसँगै युवाहरूको पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व होस्, प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल), उमेर हदबन्दी, असंशोधनीय कार्यकाल निर्धारण आदि ।
विद्यमान समाजका समस्याहरूको समाधान दिन सक्ने अग्रगामी विचार र अभ्यासले लैस युवा नेतृत्व स्थापित गर्नेतर्फ अग्रसर होऔं । अरूको आलोचनाभन्दा आफ्नै मिहिनेतमा केन्द्रित होऔं । र, हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक–वैचारिक नेतृत्वको विकासक्रमलाई तीव्रता दिन रचनात्मक संरचनागत अभ्यासहरू निर्माण गरौं ।
प्रकाशित : पुस १७, २०७८ ०९:०५
मर्न बरु गाह्रो हुन्न !
लामो बेहोसीपछि होसमा आउनु भनेको एक प्रकारले मरेर ब्युँतनुजस्तै हो क्यार ! बौरिउठेको मान्छेले आफू बाँचेकोमा खुसी हुनु कि अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गर्नु, बडो अलमल हुन्छ । मेरो निजी अनुभव त्यस्तै रह्यो ।
कोसी किनारमा जमोठ भएर सदियौंदेखि उभिइरहेका जोर सिमलझैं आमाको प्रेम र प्रियतमको प्रेम मेरो जीवनकहानीमा सतीसालजसरी शिर उठाएर ठडिएका छन् । त्यसैले त तिम्रो प्रेमको आँखिझ्यालबाट म हरदम हरपल मुवाँको मायाममतालाई चियाइरहन्छु ।
पुस १७, २०७८ कल्पना बान्तवा
सबैका लागि सबै दिन एकनास हुँदैनन् । न त कुनै साल, गते, तारिख र महिना सबैका लागि उस्तै रहन्छन् । निजी भोगाइ र घटना–परिघटनाका कारण उही समय पनि व्यक्तिअनुसार बेगल भइदिँदो रैछ । मेरो लागि चाहिँ पुस १७ गते (जनवरी १) बाँचुन्जेललाई नमेटिने पीडाको विम्ब बनेर रहने भयो ।
२०७६ चैतमा सुरु भएको मेरो खोकीले महिनौंसम्म विविध घरेलु नुस्खालगायत खसीको खुट्टीको झोललाई समेत टेरपुच्छर लाएन । अँ... मेरो खोकी सधैं यस्तै त हो नि भन्दै निच मारियो किनकि प्रथम लकडाउनको बेला थियो । सुरुका तीन महिना अमन भएर पेटमा अन्नका दाना परेनन् । कमजोरीले सुस्तरी गाल्दै गयो । म हिँड्दाहिँड्दै लड्ने, टुक्रुक्क बसेर बारीमा गोडमेल गरिरहँदा भुइँमा हात नटेकाई उभिनै नसक्ने हुन थालें । आफ्नो कोठाबाट निस्केर बैठकमा आउँदा सोफाछेउ भुइँमा पछारिएँ एक अपराह्न । मुवाँ घुँडा दुखाइले हिँड्न सक्नुहुन्नथ्यो, अत्तालिएर सोध्नुभयो, ‘मैयाँ ! के भयो ?’ आफैं उठ्न नसकेकी मैले रुँदै भनें, ‘मुवाँ ! म लडें ।’
‘हे भगमान् ! हे पशुपतिनाथ ! मेरो मैयाँलाई चाँडो जाति बनाइदेऊ,
प्रभु !’, जम्ले हात जोडेर पुकारा गर्दै मेरो विवशतामा आँसु झार्नुभयो मुवाँले !
दुई महिनापछि स्वरै भासियो । अस्पतालमा जँचाउँदा छातीमा क्षयरोगले जरा गाडिसकेछ । भर्ना गरेर टीबी, न्युमोनियाको दबाई चलाए । पीसीआर टेस्टको रिपोर्ट ल्याबमै गोलमाल भयो, पाइएन । नाक र मुखको जरामै घोचेर स्वाब स्याम्पल लिने त्यो दर्दनाक प्रक्रिया फेरि सहेँ । अस्पताल बसाइमै गोडा लुला भएर हिँडडुल गर्न असमर्थ भएँ, दुर्बलताले हरिबिजोगै बनायो । सलाइन लगाउँदा नसा फेला नपर्नाले क्यानुला घोच्दा घोच्दा दुवै हात छियाछिया भयो । दुखाइको कुनै मापन थिएन, केही समाउन र हात टेक्न सक्दिनथें । धेरैचोटि घोचिएको छालामा सुन्निएर रातो, नीलो हुँदै काला बनेका टाटाहरू हातमा बाक्लिन थाले । पछिल्लो पीसीआरको परिणाम निगेटिव आएपछि डिस्चार्ज गरे । भदौमा घर फर्केपछि त झन् सिकिस्तै भएँ । घरकालाई पनि टीबी सर्छ भनेर आफ्नै कोठामा कैदी बनें । भाइले मलाई ह्वीलचेयरमा राखेर शौचालय लान्थ्यो–ल्याउँथ्यो, म आफैं हिँडेर कमोडसम्म जान असमर्थ थिएँ । दुईचोटि वासरुमको ढोकामा उक्लँदा लडेको चोट सम्झनास्वरूप कालो दाग बनेर अद्यापि मेरो घुँडामा छ ।
भाइ अफिस गएको हुन्थ्यो, घरमा मुवाँ र म मात्र हुन्थ्यौं । म ठूलो स्वरमा बोल्न वा कसैलाई बोलाउन सक्दिनथें । कति बाजी त आफैं हिँड्न नसक्ने मुवाँले ढोकाबाहिर कसैको पदचाप सुन्नुभयो भने उसलाई हारगुहार गरेर बोलाउनुहुन्थ्यो र ‘लौन बाबु ! मेरो छोरीलाई के चाहिएको छ हेरिदिनू न ! ऊ बोल्न सक्दैन’ भनेर बिन्ती गर्नुहुन्थ्यो । राति तिनताका मलाई घरी जाडो घरी गर्मी लागिरहन्थ्यो । स्ट्यान्डवाला रिमोट कतै हराएकाले खाटभन्दा थोरै परको पंखा आफैं गएर अन/अफ गर्न सक्दिनथें, पल्लो कोठामा सुतेको भाइलाई बोलाउनुपर्थ्यो । एउटा सानो रबरको खेलौना थियो– कर्कश ध्वनि निकालेर प्याँक् प्याँक् कराउने, म त्यही बजाउँथें । तर, थाकेर चुर हुँदै निदाएको भाइको कानमा त्यो कर्कश ध्वनि पनि पस्न सक्दैनथ्यो, मुवाँले कराएर ‘बाबु ए बाबु ! दिदीले बोलाउँदै छ, उठ् त !’ भनेर बोलाइदिनुहुन्थ्यो । दयालाग्दो गरी परनिर्भर दिनरात झेलिरहेकी थिएँ ।
तीन महिनाको दबाई खाएर गरिएको खकार जाँचको नतिजाले टीबी निगेटिव देखाएपछि बल्ल घरकाले कोठाबाट बाहिर निकाले मलाई । अनि बैठक कोठामा मुवाँको खाटछेउको काउचमा लम्पसार परें । खाना देखेरै बान्ता हुने हाडछाला मात्रको काया मेरो, टीबीका बडेमानका नौवटा चक्की दिनैपिच्छे खान मन मरेर आउँथ्यो । तर, मुवाँकै आँसुले पग्लिएर दबाई खान बाध्य हुन्थें । उतिबेला मुवाँले दबाई खुवाउन करबल नगर्नुभएको भए पक्कै म आजको दिन देख्न पाउँदिनथें । आमाछोरी दुवैले मास्क लाउँथ्यौं । मुवाँलाई अँगाल्दै खुट्टा बोकाएर घुस्रिँदै सुत्ने सारै मन हुन्थ्यो मलाई, तर एक हात परको मुवाँको ओछ्यानसम्म पुग्नु मेरा निम्ति आकाशको फल टिप्नुजत्तिकै थियो । म पीडाले कराउँदा–चिच्याउँदा मेरो दुःख बुझेर आँसु खसाल्ने, मेरो आत्मबल र हिम्मत बढाउन हरसम्झव प्रयत्न गर्ने मेरी मुवाँ समीपै हुनुहुन्छ भन्ने सत्यबोधचाहिँ त्यस्ता घडीबाट गुज्रँदा मेरो एक मात्र मानसिक सम्बल हुन्थ्यो ।
अनिवार्य दैनिकी पनि स्वयम्ले सम्पन्न गर्नु अझै मेरो बुताको कुरा थिएन । क्याथेटर र डाइपरमा आश्रित थियो शौच–कर्म । आफू गुज्रिरहेको कहालीलाग्दो समयदेखि बेखबरजत्तिकै थिएँ । तर, अहिलेको स्थितिभन्दा तुलनात्मक रूपमा त्यसबेलाको अवस्था मलाई ढुक्कको लाग्छ । ती दिन–रातमा आफूले बेहोरिरहेको शारीरिक कष्ट र सकसको वर्णनातीत अनुभवबाहेक मलाई अर्थोकको वास्ता र चासो हुँदैनथ्यो । मलाई सन्चो छैन, खाना रुचिरहेको छैन । उठेर बस्नधरि सकिरहेकी छैन । यस्तै भइराख्यो भने के गर्ने होला ? जस्ता अत्यासिला सोच मेरो मनमस्तिष्कमा ढिम्कनै सक्दैनथिए । न मलाई कसैको माया लाग्थ्यो, न त कुनै चिन्ताले पिरोल्थ्यो । न मनमा कसैप्रति दया–ईर्ष्याभाव जाग्थ्यो । चेतन र अवचेतनको लागछोडले मलाई घडीको पेन्डुलमजस्तो बनाइरहन्थ्यो । ‘मैले खाना खाएँ ?, मैले दबाई खाएँ ?, कस्तो झमक्क रात परेको, मुवाँ ?’ नानाथरी सोध्दै मुवाँलाई झिँजो लगाइरहन्थें । ‘तिमीलाई चम्चाले भर्खरै थोरै दालभात खुवाएको, मैयाँ ! दबाई पनि केराको टुक्रामा एक एक टबलेट घुसारेर ताराले तिमीलाई खुवाइसक्यो, काली ! अहिले रात हैन दिउँसो हो ...’, मुवाँ बताउनुहुन्थ्यो । क–कसलाई के–के भनें र कतिको चित्त दुखाएँजस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्झनामा टिकिरहँदैन थिए । मुवाँलाई नै पनि मैले कति बाजी भन्नु/नभन्नु भनें, तर छोरीले भोगिरहेको अधबेस्रो अवस्था बुझेर मुवाँले मलाई हरेकपल्ट माफ गरिदिनुहुन्थ्यो ।
निधारमा केही सास फेर्न अझ बाँकी लेखिएको रहेछ, त्यसैले त डार्बिन जीबाको ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’ मेरो हकमा साँचो साबित भएको ! घस्रीघस्री बाँचे पनि सास नफुस्कुन्जेल त बाँचेकै मान्नुपर्‍यो !
लामो बेहोसीपछि होसमा आउनु भनेको एक प्रकारले मरेर ब्युँतनुजस्तै हो क्यार ! बौरिउठेको मान्छेले आफू बाँचेकोमा खुसी हुनु कि अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गर्नु बडो अलमल हुन्छ । मेरो निजी अनुभव त्यस्तै रह्यो । क्षयरोग र त्यसको कडा दबाईले खटिया समाएपछि धेरैजसो अर्धबेहोसीको अवस्थामा रहने मैले ज्यादाजसो कुराहरू बिर्सिएँ । तर, त्यस्तो हालतमा पनि, एक रात अचानक एउटा फोन गरेँ । फोनको छोटो कुराकानीमा खासै यही कुरा गरेँ भन्ने अझै यकिन छैन मलाई । तर, योचाहिँ पक्का सम्झना छ कि म रोएकी थिएँ फोनमा, सायद त्यति बेलाको मेरो पीडा र व्यथा आँसु बनेर छचल्किएको थियो । छेउको ओछ्यानमा मुवाँ सुतिरहनुभएको थियो । उहाँले सायद मेरो त्यो फोनवार्ता याद गर्नुभएन ।
मैले त्यस रात तिमीलाई फोन गरेकी थिएँ, प्रिय मान्छे ! बडो ज्याद्रो हुनेरैछ मान्छेको मानसिकता, केही नसम्झने अवस्थामा पनि माया गरेको मानिसलाई सम्झने ! मानौं, कोमामा रहेका कोही कोही बिरामीले चलायमान परिवेशलाई महसुस गरिरहेजस्तै ! मेरो त्यो आधारातको अप्रत्याशित फोन गराई त्यही गहिरो लगावको नतिजा थियो भन्नेमा ढुक्क छु ।
तिमीसम्म पुग्न मलाई नौ सय खोला तरेर नौ डाँडा काटेर पनि सम्भव छैन, थिएन । त्यसैले होला अवचेतन मनले मलाई फोनमै भए पनि तिम्रो मायालु सान्त्वनाको आवाज सुन्न उक्साएछ । फोन वार्तापश्चात् मैले मनमनै खुई काढें, ‘तिम्रो मायाले मलाई सन्चोले मर्न पनि नदिने भयो !’ लगत्तै
विह्वल बन्दै सम्झिएँ तिम्रा उद्गारहरू – तिमी कति ज्ञानी छौ, मैयाँ ! सबै छोरी तिमीजस्तै भैदिए । अनि के ! त्यो झुलभित्र राजविराजको गर्मी रातमा तिमीलाई मुवाँले पँखा हम्केको मैले आफ्नै आँखाले देखेजस्तै लाग्छ के मलाई ! त्यो मात्र के, मैले त तिम्रो न्वारान नै देखेजस्तो लाग्छ । अनि मेरै आँखा अगाडि तिमी हुर्केजस्तो लाग्छ, काली !
तिमी मलाई दुरुस्त उसरी नै बुझ्छौ जसरी मेरी मुवाँ बुझ्नुहुन्थ्यो । मुवाँले जसरी नै तिमी मलाई ‘काली’, ‘मैयाँ’ सम्बोधन गर्छौ । त्यसैले पनि तिम्रो प्रेममा म मुवाँको ममता छिपेको पाउँछु र एक किसिमको सन्तोक मान्छ मेरो दग्ध चित्तले । मान्छेको मन न हो, केही न केहीमा चित्त बुझाउने मेसो
भेट्टाइछाड्दोरैछ ! मेरो लागि मुवाँको प्रेम र तिम्रो प्रेम सदैव एकै कित्तामा उभिएर ममा बाँच्नुको मोह जगाइरहन्छन्, दुवै प्रेम स्तुत्य र अतुल्य छन् मलाई !
खासमा के होला हगि यो प्रेम भन्ने अबोधगम्य कुरा ?
बर्ट जोशुवा (रुबिन जोशी) लेख्छन् – ‘...प्रेम एउटा मामुली आवेग हो । वैज्ञानिक दृष्टिले रोमान्टिक प्रेमको तीन तह हुँदो रहेछ, यौन–आकर्षण र लगाव ...हामीलाई यस्तो व्यक्ति मन पर्छ, जसले कुशलतापूर्वक हाम्रो जिनलाई निरन्तरता दिन सकोस् । पुरुषको दृष्टिमा आफ्नो वीर्य धारण गरेर जन्म दिन सक्ने र आफ्नो सन्तानलाई हुर्काइदिन सक्ने महिला भए एक किसिमले पुग्यो । अब महिलाहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । पुरुषको शुक्रकीट र स्त्रीको डिम्ब संयोजन नै जीवनको सुरुवात हो । यदि संसारमा हुने प्रजननका लागि अलग अलग लिंग (स्त्री, पुरुष) नचाहिने भएको भए कुनै पनि प्रेम व्रेम भन्ने आवेग प्रकृतिमा हुँदैनथ्यो । प्रेम एउटा त्यस्तो सम्झौता हो जसले परस्परको जिनलाई निरन्तरता दिन मदत गर्छ ...।’
के साँच्चै आफ्नो जिनलाई निरन्तरता दिन नै प्रेम गर्छन् त मानिसहरू ?
हिन्दी सिनेमा ‘लस्ट स्टोरिज’ हालसालै हेरें, जसभित्रका चार कथाहरू शारीरिक क्षुधाको तुष्टिमै केन्द्रित छन् । सोचें, के वासना र प्रेम एकै कुरा हो ? के प्रेम हुनका निम्ति यौनसम्बन्ध आवश्यक छ ? दस मनमा एक मनले भन्छ– होला र त, वात्स्यायनले दुनियाँले मानेको शास्त्रै लेखे – कामसूत्र । हाम्रा मन्दिरका टुँडालहरूमा खोपिए अभिसाररत् कलात्मक मूर्ति चित्रहरू र अजन्ता एलोराका गुफाहरू सजिए कामसुखका विविध आसनहरू, अनुपम प्रस्तर कलाकृतिबाट । र, एफ्रडाइटी सेक्सुअल लव र सुन्दरताकी देवी मानिइन् प्राचिन ग्रीसमा !
तर, बाँकी मन नकार्छ – होइन, प्रेम भनेको सेक्स होइन ! उसो र, सेक्सबिना नै हृदयमा गहिरो गरी जरा गाड्न सक्षम हुन्छ प्रेम, तर सेक्समा प्रेम हुनु अनिवार्य छैन भन्छन् बुज्झकीहरू ! तर, एकअर्कालाई अथाह प्रेम गर्नेहरू यदि दैहिक रूपमा पनि एकाकार हुन्छन् भने त्यो प्रेम झनै प्रगाढ हुन्छ भन्नेचाहिँ मलाई पनि लाग्छ । यौन व्यवसायमा लागेका धेरैजसो पेसाकर्मीका लागि भने यौनकार्यमा प्रेम पनि हुनु वाहियातै हो । व्यवसायलाई इमानदारीसाथ निर्वाह गर्ने प्रसंगमा मलाई पाउलो कोहेलोको उपन्यास ‘इलेवेन मिनट्स’ की प्रमुख पात्र झलझली याद आउँछिन्, जो उनीकहाँ आउने हरेक ग्राहकको इच्छामुताबिक आफूलाई ढाल्छिन् र तिनको पूर्ण सन्तुष्टिका लागि हरतरहले आफूलाई समर्पण गर्छिन्, तर कुनै ग्राहकलाई प्रेम गर्दिनन् ।
‘लस्ट स्टोरिज’ हेरेलगत्तै हेरेको फिल्म ‘इज लव इनफ, सर !’ ले मेरो धारणालाई मजबुती प्रदान गर्‍यो कि गहिरो प्रेममा भावनाको प्रधानता सन्निहित हुन्छ । मलाई यो लेखिरहँदा तसलिमा नसरिनको उपन्यास ‘लज्जा’ को एक प्रसंगको तीव्र सम्झना भइरहेको छ, जहाँ पुरुष प्रमुख पात्र सुधामयको लिंग छेदन गरिदिन्छन् जेहादीहरूले, उनकी पत्नीले पतिलाई उसरी नै प्रेम गरिरहन्छिन् जसरी पहिले गर्थिन् । सेक्सको आकांक्षाबिनै मानिस कसैलाई प्रेम गरिरहन सक्छ, हिन्दी फिल्म ‘सदमा’, ‘गुजारिश’ ले त्यही देखाउँछन् । वासनाका पलहरू आवेगको समाप्तिपछि स्मृतिबाट ओझेल पर्लान्, तर जति पटक बोले पनि, लेखे पनि र कबोले पनि समर्पित प्रेमका बातहरू कहिल्यै सकिँदैनन् । प्रेमकथाहरू अजर–अमर रहिरहन्छन् र प्रेमपात्रहरू अजम्बरी बन्छन् ।
‘राजा’ शब्द मेरो जीवनमा प्रेमको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको देखेर ताज्जुब लाग्छ । सुरुको मेरा प्रेम पात्र थिए राजा खड्का, जो मेरो क्षणिक सुकुमार आकर्षणदेखि सर्वथा अनजान थिए । उनी मेरा स्कुले साथी पवन बस्नेतका काठमाडौं बसेर अध्ययन गरिरहेका दाजु थिए । र, एउटा शुक्रबारे कक्षा समाप्तिपछि हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीमाझ बसेर गितार बजाउँदै गाउँदै थिए– हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालुलाई ...। उतिबेला उनको सम्मोहनको जादु ममा यस्तरी चढ्यो कि लाग्यो त्यो ‘हजार आँखा हेर्ने – हजार हात छेक्ने मायालु’ उनले मलाई नै भनेका हुन् । किशोरी मन केही दिन त्यसैत्यसै फुरुंग
भइरह्यो । र वर्तमानमा, उहिले भनिने गरेको कहिल्यै घाम नअस्ताउने मुलुकमा जस्तै मेरो मनको साम्राज्यमा घाम बनेर छाइरहने राजा तिमी ! एकबारको जुनीमा प्रेम मात्र एकचोटि र केवल एक जनासँग हुन्छ भनेर किटानी जाहेरी दिन नमिल्नेरैछ । तापसी पन्नुले भनेजस्तै जीवनमा प्रेम बारबार भइरहँदोरैछ, त्यो बेग्लै कुरा हो कि ती प्रेमका पकड र प्रभाव कति बलशाली हुन्छन् । लामो दूरी वा छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्रजस्ता ! तर, झन्डै होसहवास गुमाएको अवस्थामा पनि मैले तिमीलाई याद गर्नुचाहिँ साँचो प्रेमको तिलस्मी घटना हो भन्ने मान्छ मेरो मनले ।
कोसी किनारमा जमोठ भएर सदियौंदेखि उभिइरहेका जोर सिमलझैं आमाको प्रेम र प्रियतमको प्रेम मेरो जीवनकहानीमा सतीसालजसरी शिर उठाएर ठडिएका छन् । त्यसैले त तिम्रो प्रेमको आँखिझ्यालबाट म हरदम हरपल मुवाँको मायाममतालाई चियाइरहन्छु । तिम्रो साथको उष्मामा म मुवाँको न्यानोको न्यास्रो मेट्छु । एउटै कुराले मन खिन्न हुन्छ मेरो कि बिस्तारै हिँडडुल गर्न थालेकी अहिलेकी मलाई देखेर तिमीजसरी नै अपार आनन्द र सन्तोकले भरिपूर्ण हुन नपाउँदै मुवाँले सधैंका लागि मलाई छाडी जानुभयो, गएको पुस १७ गते, १ जनवरी ।
अन्त्यमा, यही लेखमार्फत स्वदेश–परदेशमा रहनुहुने मेरा प्रिय पाठक, शुभेच्छुक मित्र र आफन्तजनहरू, जसले मलाई तन–मन–धनले निःस्वार्थ सेवासाथ दिनुभयो, तपाईंहरूको सद्भाव र स्नेहप्रति म सधैं आभारी रहनेछु । सबै सबैमा नमन् !
मेरी मुवाँको प्रथम पुण्यतिथिका दिन उहाँलाई यही शब्द–श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेँ !
र, मुवाँले प्रायः गुनगुनाउनुहुने ‘यस्तो पनि हुँदोरैछ जिन्दगीमा कहिलेकहिले ...’ का गायक प्रिय फत्तेमानज्यूको स्वरमा स्वर खामें – मर्न बरु गाह्रो हुन्न तिम्रो माया मार्नै सकिन्न... !
प्रकाशित : पुस १७, २०७८ ०९:०४